‘एक्लै बस्नुको अर्थ म चरित्रहीन होइन’
म पत्रिकाको विवाहसम्बन्धी पेजमा आफ्नो कान्छो भाइको लागि बेहुली खोज्नका लागि एक विज्ञापन हेरिरहेको थिए ।
तब एक आफन्तले एक लाइनलाई रतो रंगले हाइलाइट गरे । त्यस लाइनको शब्द थिए,‘उसकी एक विवाह नगरेकी दिदी छिन् ।’ उनले भने,‘ठूली बहिनीको अहिलेसम्म विवाह नगर्नु हाम्रो केटाका लागि एक राम्री युवती खोज्ने काममा धेरै समस्या उत्पन्न गर्छ ।’
उनको यो शब्द कुनै तीर को रुपमा मेरो टाउकोमा लाग्यो । म पीडामा परे र निकै मुस्किलले आफ्नो आशु थामे ।
म भित्र रिसको आगो सल्किएको थियो । उसले यस्तो कुरा कसरी गर्न सकेको ?
उनको कुरा सुनेर मलाई लागेको थियो कसैले मेरो गला दबाई रहेको छ ।
म चिच्याउन चाहिरहेको थिए आखिर मेरो विवाह नगर्ने फैसला मेरो भाइलाई राम्री युवती मिल्ने यात्रामा अवरोध हुन सक्छ ?’
तर त्यसबेला म चुप बस्नु नै राम्रो थियो ।
म अपेक्षा गरिरहेको थिएकी मेरो भाइ या मेरो बुवाले त्यस नातेदारको त्यो भनाइको विरोध गर्ने छन् ।
तर उनले पनि अरु नातेदार जस्तै मेरो दुखलाई किनारा गर्नु नै राम्रो सम्झे ।
दुई भाइबहिनीमा म ठूली थिए । यसकारण यो पहिला देखि नै तय थियो कि मेरो विवाह पहिला हुने छ । तर मैले यस्तो गरिन ।
बुवा आमाले मेरो विवाह बारे जो सपना देखेका थिए त्यसलाई मैले पूरा गरिन । जसका कारण हामीबीच धेरै तनावको अवस्था बन्यो ।
एक दिन मेरो स्कूलको दिनहरुका एक पुरानो साथीले मलाई भने,‘म जान्दछु कि तिमी विवाह गर्न चाहँदैनौं तर फेरि पनि तिम्रो केही इच्छा त अवश्य होला । यदी तिम्रो त्यस्तो इच्छा छ भने त्यसलाई पूरा गर्ने प्रयास म गर्न सक्छु ?’
ती महाशयले भने कि उसलाई यस्तो गर्दा खुसी हुने छ र उसकी पत्नी र बच्चालाई यसबारेमा केही थाहा हुने छैन ।
आफ्नो साथीको यस्तो भनाइले म अचम्ममा परे ।
हो, यो साचो हो कि म आफ्नो आवश्यकता या इच्छाबाट अनजान थिइन । र यसका लागि मलाई एक पार्टनरको आवश्यकता थियो । तर यसको मतलब म कसैका लागि पनि ‘उपलव्ध छु’ भन्ने हो ?
यसभन्दा धेरै हैरानीको कुरा थियो कि यस्तो प्रस्ताव मेरो पुरानो साथीले मलाई गरेको हो । जसको बारेमा मैले कहिले पनि गलत सोचेको थिइन ।
जब मानिस म ‘सिंगल’ भएको थाहा पाउँछन् तब उनीहरुको बिचारमा परिवर्तन आउँछ । मसँग कुरा गर्ने उनीहरुको तरिका पहिलाको जस्तो हुँदैन ।
तर यी कुराले म समस्यामा छैन । यो सवै मेरा लागि सामान्य बनेको छ । म आफ्नो फैसला स्वयं लिन सकछु । मलाई मन पर्ने र नपर्ने निर्णय गर्न म स्वतन्त्र छु ।
आज म ३७ वर्षकी भए र एक्लै बस्ने मेरो निर्णयमा मलाईल कुनै पश्चाताप छैन ।
म त्यसबेला २५ वर्षकी थिए जतिबेला मैले विवाह नगर्ने फैसला गरेको थिए ।
मैले पैसा कमाउन शुरु गरेको थिए र म चाहन्थे कि म आफ्नो सपनालाई पूरा गरु र नयाँ उचाइलाई चुमु ।
जब जब मेरो करियर माथि उठ्न लागि रहेको थियो आमा बुबाले केटा खोज्ने कामलाई तिब्र बनाएका थिए ।
मानिस मेरो आमा बुबालाई भन्दथे कि विवाहका कारण सुरक्षा मिल्छ । तर उनीहरुको कुरामा आएर सुरक्षाका लागि कसैले पनि विवाह गर्नु हुँदैन ।
मेरो बुवा चाहनुहन्थ्यो कि चाडै म ‘सेटल’ होउ । यसका लागि मैले एक दुई होइन १५ जना केटा हेरे ।
मैले आफ्नो बुबाको मान मर्दनका लागि ती केटासँग भेटेको थिए । ति मध्ये कोही एक पनि मलाई मन परेनन् ।
यो अनुभावबाट मलाई लाग्यो कि आखिरमा मैलाई विवाह गर्न मन नै छैन ।
मेरो आमा बुबाले पनि यो कुरा बुझे तर अरु मानिस यो विषयमा फरक फरक राय बनाइरहेका छन् ।
उनीहरुलाई लाग्छ कि म धेरै नखरा देखाइरहेको छु । म घमण्डी, आवारा, आमाबुवाको भावना नजुज्ने, असभ्य केटी हुँ ।
म बुज्दिन कि मानिसलाई मेरो बारेमा कुरा गर्दा के आनन्द आउँछ ?
र जब यी सवैबाट पनि उनीहरुलाई आनन्द आउँदैन तब मेरो चरित्रमाथि उनीहरु कुराकानी गर्न शुरु गर्थे ।
तर मेरो विचार स्पष्ट थियो । कुनै प्रेम सम्बन्ध राख्नु वा लिव इन रिलेशनशिपमा रहनु कुनै नराम्रो कुरा होइन विश्य यस्तो विचारमा कयौं कदम अगाडि बढिसके ।
(यो भारतको उत्तर पश्चिम हिस्सामा बस्ने एक महिलाको वास्तविकता हो जो बीबीसी संवाददाता अर्चना सिंहले कुराकानीका आधारमा बनाएकी हुन् । महिलाको आग्रहमा उनको नाम गोप्य राखिएको हो । )
‘ओछ्यानमा जबरजस्ती गर्ने पतीलाई मैले छाडिदिए’